Owesona buhle bubukeka buvela kwi-2020 Oscars | #Ingxelo
Februwari 10, 2020
Aobona bumnandi kwezolonwabo kwihlabathi liphela, amabhaso esiDanga ngokwesiqhelo anabantu abadumileyo abahamba phantsi kwikhaphethi ebomvu kwezinye zezona zitayela zintle kwaye nembonakalo yobuhle yexesha lamabhaso. I I-2020 Oscars Khange baphoxise njengoko intle kangaka iHollywood yayihlala kwiDolby Theatre eLos Angeles enxibe ubuhle obuhle kakhulu bokujonga ukuthelekisa unxibe iimpahla zabo ezintle.
Amagqabantshintshi esikhundla sonyaka angama-92 azaliswe zizinto ezibonakala zinhle kwaye zibukeka zingaqhelekanga kodwa njengazo zonke izinto zaseHollywood, inkangeleko yethu sithandana nayo yayingenasiphoso! Isuka IiRegina King's pink ithambile ithambile jonga Imanyano yeGabrielle Isithixokazi esibhinqileyo esibhinqileyo sambathiswe bubuso obunobuso obunobuso kunye ne-liner yobugcisa obunamaphiko, kwakungekho ukunqongophala kwemilingo yentombazana emnyama kwikhaphethi ebomvu. Umdlali weqonga Scarlett Johansson Igqunywe kwikhaphethi ebomvu ngobuhle obungaphelelwa lixesha obunokusebenza ngomlingo kuyo nayiphi na imtshakazi yeklasi.
Ukuba kukho i-Oscar yokujonga ubuhle obuhle bekhaphethi ebomvu, elo bhaso liya kuya kumamkeli we-TV Iholo likaTamron. Ukusuka kwicala lakhe elisecaleni le-pixie ukuya kwimilebe yomntwana opinki kwaye wagxininisa isiciko esisezantsi, iTamron Hall yayingaphezulu kwe-vibe kwaye isikhumba sakhe esikhanyayo yayiyi-icing kwikhekhe.
Nokuba ufuna ukukhangeleka ungaphelelwa xesha kwi-lipstick ebomvu njengoko ubonwe UMargot Robbie okanye ukuthanda ukujikisa itsheki edlekileyo-yenza njengoko kubonwe kuyo Salma Hayek Pinault, sijikeleze ubuhle obuhle kakhulu ukusuka kwi-2020 Oscars yempembelelo yakho.
Jonga ubuhle obufanelekileyo be-rave-efanelekileyo ukusuka kwi-2020 Oscars ...
Tracee uEllis Ross
Ifoto yeTyala: Imifanekiso kaFetty
Uhlobo lokwenza umxholo wohlobo lwantlandlolo lwenzelwe abafundi bethu kuphela. Ukuba iphinde yavela kwakhona, yahanjiswa, yagqithiselwa, yaze yagcinwa, okanye ngenye indlela esetyenziswa yiyo nayiphi na indlu yokushicilela okanye iibhlog, ukusetyenziswa okunjalo kufanele kunikeze ikhonkco ngqo kule nqaku lomthombo. Ukusetyenziswa kunye / okanye ukubhaliswa kulo naliphi na icandelo lale ndawo kunokwamkelwa kwethu Imithetho neMiqathango kwaye umthetho wabucala.
Ava DuVernay Billie Eilish Shakira UCynthia Erivo Okufumaneka Gabrielle Union UJanelle Monae Kaitlyn Dever UMargot Robbie I-Oscars 2020 Regina King Salma Hayek Pinault Saoirse Ronan Scarlett Johansson I-Silbley Scoles I-Oscars 2020 Tracee uEllis Ross ZAZIE BEETZ
Uhlobo Rave Februwari 10, 2020
I-Rave News Digest: I-Zozibini Tunzi ibuyela ekhaya, Intombazana ye-Skinny Kwixesha leThutyana le-6 ilapha, Dele Alli Apologize + Okungakumbi